Iimpawu ezili-12 zeenkwenkwezi zeZodiac kunye nemihla yazo, iintsingiselo kunye nokuhambelana - Khetha Uphawu
Iimpawu zeZodiac kunye nentsingiselo kunye neempawu zeempawu zeenkwenkwezi
Ngokucofa uphawu lwakho lwezodiac uya kuba nakho ukwazi iprofayili epheleleyo yezodiac yakho, into ongowayo kunye neeplanethi ezilawula uphawu lwakho lwezodiac!
x Aquarium NgoJanuwari 20-Februwari 18 intlanzi (NgoFebruwari 19 – Matshi 20) Aries (NgoMatshi 21-Aprili 19) Taurus (Epreli 20 - Meyi 20) Gemini (ngoMeyi 21-Juni 20) Umhlaza (Juni 21 - Julayi 22) Leo (NgoJulayi 23–Agasti 22) Virgo (23 Agasti - 22 Septemba) Iponti (NgoSeptemba 23-Okthobha 22) I-scorpio (Okthobha 23-Novemba 21) Sagittarius (NgoNovemba 22-Disemba 21) Capricorn (NgoDisemba 22-Januwari 19) IHoroscope ITarot Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Uthando Ukuhambelana Ikhalenda yeZodiac Izinto Izindlu ezili-12 IiPlanethi Iimpawu Itshathi Yokuzalwa
Ukuba ufuna ukufumanisa ukuba yintoni uphawu lwakho lwezodiac kwaye zeziphi iimpawu zezodiac ohambelana nazo, ufikile kwindawo efanelekileyo. Apha uya kufumana yonke into enxulumene neempawu ze-zodiac kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi, ukuhambelana kweempawu ze-zodiac kunye neentsuku ezinethamsanqa kuphawu ngalunye lwe-zodiac.
Kukho imiqondiso ye-zodiac ye-12 kwaye ngamnye unamandla kunye nobuthathaka, iimpawu ezizodwa, iminqweno kunye nesimo sengqondo kwabanye abantu kunye nobomi. Ngokusekelwe kuhlalutyo lwemifanekiso yesibhakabhaka, kunye nendawo yeeplanethi ngexesha lokuzalwa, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusinika ingcamango yeempawu ezisisiseko zomntu ngamnye, izinto abazithandayo, iziphene zabo kunye noloyiko lwabo. Ukwazi iimpawu ezisisiseko zemiqondiso yeenkwenkwezi kunokusinceda ngokwenene ukubazi ngakumbi abantu.
Umqondiso ngamnye wezodiac ezili-12 ufunyanwa phantsi kwento ethile yezodiac. Izinto ezine zezodiacal zezi: umoya, umlilo, umhlaba namanzi kwaye nganye kuzo imele uhlobo lwamandla abalulekileyo asebenza kuye ngamnye wethu. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusenzela ukusinceda sigxininise loo mandla kwizinto ezintle, kunye nokusinceda ukuba siqonde ngcono iimpawu zethu ezintle kwaye simelane nezingalunganga.
Ezi zinto zine zifumaneka kumntu ngamnye kuthi kwaye zichaza iintlobo ezine zobuntu ezizodwa ezinxulumene nemiqondiso yeenkwenkwezi. Izinto ezine zezodiac zibonisa impembelelo enzulu kwiimpawu zomlinganiswa ezisisiseko, iimvakalelo, ukuziphatha kunye nendlela yokucinga.
Iimpawu zamanzi ngabantu abanomdla kakhulu kwaye banovelwano kakhulu. Zinomdla kakhulu kwaye zinokuba yimfihlakalo njengolwandle ngokwalo. Iimpawu zamanzi zineenkumbulo ezintle kwaye ziyathanda iincoko ezinzulu kunye nobudlelwane obusondeleyo. Bazigxeka ngokuphandle kwaye bahlala bekulungele ukuxhasa abo babathandayo. Iimpawu zamanzi zezi: Umhlaza , I-scorpio kwaye intlanzi .
Iimpawu zomlilo zikholisa ukuba nomdla, amandla, kunye nobushushu. Bacaphuka msinya, kodwa baxolela ngokulula nje. Bangabahambi abanamandla amakhulu. Bomelele kakhulu ngokwasemzimbeni kwaye bangumthombo wenkuthazo kwabanye abantu abaphantsi kweempawu zomlilo bakrelekrele, bayazazi, bayayila kwaye bajonge phambili, bahlala belungele isenzo. Iimpawu zomlilo zezi: Aries , Leo kwaye Sagittarius .
Iimpawu zomhlaba zezo zineenyawo eziqinileyo emhlabeni kwaye zisinceda ukuba senze okufanayo. Ngokuqhelekileyo balondoloza kwaye banokwenyani, kodwa banokuba neemvakalelo kakhulu. Bathanda ubunewunewu nezinto eziphathekayo. Ziyasebenza, zinyanisekile, zizinzile kwaye zihlala zikho kubathandekayo babo ngamaxesha anzima. Iimpawu zomhlaba zezi: Taurus , Virgo kwaye Capricorn .
Iimpawu zomoya ngabantu abathanda ukunxibelelana kunye nokwakha ubudlelwane nabanye abantu. Bangabantu abacingayo, abanobuhlobo, abanengqondo, abanonxibelelwano kunye nohlalutyo. Bathanda iingxoxo zefilosofi, iindibano zokuzonwabisa, kunye neencwadi ezilungileyo. Bayakonwabela ukunika iingcebiso, kodwa banokuba nzulu kakhulu. Iimpawu zomoya zezi: Gemini , Iponti kwaye Aquarium .
Ukuhambelana kweTheyibhile yeIimpawu zeZodiac
Akukho zibonakaliso ze-zodiac ezingahambelaniyo kwi-astrology, nto leyo ethetha ukuba nayiphi na imiqondiso emibini iyahambelana ngakumbi okanye ngaphantsi. Abantu ababini abaneempawu ze-zodiac ezihambelana kakhulu baya kufumana ii-affinities ezininzi kuba banobude obufanayo. Kodwa abantu abaneempawu ze-zodiac ezingahambelani baya kufuna umonde kunye nobuchule ngakumbi ukuze bafezekise ubudlelwane obonwabileyo kunye nemvisiswano.
Umoya : Gemini, Libra kunye Aquarius
Iimpawu ezizezinye ziyahambelana ngokwendalo njengoko ziqondana. I-Synastry lisebe lokuvumisa ngeenkwenkwezi apho iitshathi ezimbini zokuzalwa zithelekiswa ukumisela umgangatho wonxibelelwano lothando phakathi kweempawu ze-zodiac. I-synastry, okanye i-horoscopes yobudlelwane, inokuba sisixhobo esiluncedo kwizibini ezifuna ukwazi amandla kunye nobuthathaka bobudlelwane babo. Ukuthelekisa imiqondiso kunokukunceda uqonde ngcono iqabane lakho, nto leyo enokuphumela kubudlelwane obungcono.
Oku kulandelayo yitshathi ebonisa ukuhambelana kothando lweenkwenkwezi zeempawu zezodiac. Jonga itafile kwaye ufumanise ukuba yeyiphi imiqondiso yezodiac enokwenza isibini esingcono!
Ukufunda itshathi ehambelanayo yeempawu zezodiac, kufuneka ufumane uphawu lwakho lwezodiac kwikholamu yasekhohlo kwaye ubone ubungakanani bentliziyo ekwikholamu ehambelana nomqondiso wezodiac weqabane lakho, intliziyo inkulu! iya kuba kukuhambelana kwakho!
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kusekelwe kwinzululwazi ngeenkwenkwezi eqhelekileyo. Ukukhula kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kunxulunyaniswa nenzululwazi ngeenkwenkwezi eyabakho ngexesha loLawulo lwakwaHan Iinkwenkwezi zaseTshayina yeyona nkqubo indala eyaziwayo yokuvumisa ngeenkwenkwezi ehlabathini yaye iquka izilwanyana ezilishumi elinesibini isinye esimela unyaka othile. Ngokutsho kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina, unyaka wokuzalwa komntu umelwa sesinye sezi zilwanyana. Iimpawu ezilishumi elinambini zezilwanyana okanye imiqondiso yezodiac yimpuku, inkomo, ingwe, umvundla, inamba, inyoka, ihashe, igusha, inkawu, iqhude, inja kunye nehagu. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kukwanezinto ezintlanu zendalo ezizezi, amanzi, iinkuni, umlilo, umhlaba kunye nesinyithi. Ngokutsho kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina, ikamva lomntu linokumiselwa kwindawo ezikuyo izijikelezi-langa nendawo elikuyo iLanga neNyanga ngexesha lokuzalwa komntu. AmaShayina akholelwa ukuba unyaka wethu wokuzalwa unokugqiba isimo sethu sengqondo kunye namandla ethu kwaye izilwanyana zokuzalwa ziyimpawu kwaye zimele ukuziphatha okuthile.
I-Jyotisha yinkqubo yendabuko yamaHindu yokuvumisa ngeenkwenkwezi kunye neenkwenkwezi, eyaziwa ngokuba yiHindu okanye i-astrology yamaNdiya okanye, kutshanje, i-astrology yeVedic. I-astrology yeVedic ye-horoscopes yohlulwe yangamacandelo amathathu aphambili: i-astronomy yaseNdiya, i-astrology yaseMundane kunye ne-Predictive astrology. I-Astrology yaseIndiya inokutyhila umlingiswa wethu, iqikelele ikamva lethu kwaye iveze ezona mpawu zihambelanayo. Esinye sezona zixhobo zibalaseleyo esizinikwe yiVedic ukuvumisa ngeenkwenkwezi kukuhambelana kweenkwenkwezi. I-Nirayana (i-sidereal zodiac) yifilim yentsomi ye-360-degree, ethi, njengezodiac yetropikhi, yahlulwe yangamacandelo alishumi elinambini alinganayo. Ngokungafaniyo nokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseNtshona okusebenzisa i-zodiac ehambayo, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kweVedic kusebenzisa i-zodiac esisigxina. Ke kwiVedic zodiac system awuzizo imiqondiso yeenkwenkwezi obucinga ukuba uyiyo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaMayan kusekelwe kwikhalenda yamaMaya kwaye yenye yezona ntlobo zemibono yokuvumisa ngeenkwenkwezi. Ikhalenda ye-Mayan okanye i-Tzolkin isekelwe kumandla angabonakaliyo kwi-cosmos kunye nokuvela kwendalo. Ikhalenda yeTzolkin iqulethe izibonakaliso zeentsuku ezingamashumi amabini (izizwe zelanga) kunye neenombolo ezilishumi elinesithathu ze-galactic, okwenza ikhalenda yeentsuku ze-260. AmaMayans amandulo ayekholelwa ukuba ukuze kubekho uxolo nemvisiswano ebomini, umntu kufuneka aqonde kwaye ahambelane nalo mandla endalo yonke. Ngamnye kule miqondiso ingamashumi amabini imele usuku kwikhalenda yeMeya, ngaloo ndlela ivumela abantu beenyanga ezahlukeneyo kunye neminyaka ukuba babelane ngeglyph efanayo. Uphawu lomhla wamaMaya luchaza ubuntu bomntu.
Kutheni sikholelwa kuyoUkuvumisa ngeenkwenkwezi?
Impendulo yalo mbuzo ifumaneka kwakwesi sizathu sokuba sikholelwe phantse kuyo nayiphi na inkolelo ebomini. Abantu bakholelwa ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kuba kunika izinto ezininzi ezinqwenelekayo, njengenkcazelo nesiqinisekiso ngekamva, iindlela zokucombulula iingxaki, nokuphucula ubuhlobo namaqabane, intsapho nabahlobo.
I-Astrology iqinisekisa ukuba ebomini akukho nto iyenzeka ngengozi kwaye yonke into eyenzekayo kuthi iyenzeka ngesizathu esithile. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusinika iimpendulo ezilungileyo zokuba kutheni ezi zinto zisenzeka kuthi kwaye kunokukuxela kwangaphambili. Ngale ndlela, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunceda abantu baliqonde ngcono ngakumbi ihlabathi elibangqongileyo.
Njengoko kusenziwa namhlanje, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusebenza kakuhle. Abantu abaninzi abatyelela izazi ngeenkwenkwezi okanye abafunda iinkwenkwezi zabo rhoqo baye bazive bonwabile yaye banelisekile. Oku akuthethi ukuba izazi ngeenkwenkwezi zichaza kwangaphambili ngokuchanileyo ikamva labantu ngokusekelwe kwimihla yabo yehoroscope, kodwa kuthetha ukuba ukuba nehoroscope eneneni kunokuba ngamava anelisayo.
Umhlaba uphantsi kweenkwenkwezi eziyaziwa ngumntu wonke namhlanje njengeenkwenkwezi zemiqondiso. Abantu abaninzi balandela iinkwenkwezi zabo ngenkuthalo yaye bakholelwa kwintsingiselo yemiqondiso yabo yokuvumisa ngeenkwenkwezi. Oku akumangalisi, kuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthandwa kakhulu kwaye wonke umntu uyazi ukuba yeyiphi imihla kunye nomqondiso wabo. Abantu bayakonwabela ukufunda ihoroscope yabo kwaye oku kuhlala kukhokelela kutshintsho kubuntu, indlela yokuziphatha kunye neenkqubo zokwenza izigqibo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusindisa ubomi bokwenyani njengoko kukuvumela ukuba wazi ngemiqobo kunye neengxaki ezizayo kwangaphambili. Ukuba ufuna ukukholelwa kwiingcebiso kunye nezilumkiso ezicetyiswayo kwi-horoscope yokufunda unokuzigcina iintlungu ezininzi ngaphandle kokwenza okuninzi.
Abantu bakholelwa ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kuba kuyonwabisa nje. Imihla yeZodiac, imiqondiso, amaqhinga amancinci okuvumisa nokunye okuninzi. Sinokunxulumanisa imiqondiso yezodiac phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu kwaye siya kubona ukuba zinokuqonda ngokwenene kwaye zichanekile. Iinkwenkwezi zethu zahlukile yaye zinokusinceda sifumane size sityhile izinto esinamandla kuzo, ubuthathaka bethu, kunye neempawu zethu zendalo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusinceda ukuba sifumanise ukuba loluphi unxulumano oluhambelanayo-yeyiphi olungahambelaniyo. Ukuhambelana kwe-Horoscope kunokuphucula ubudlelwane bethu kunye nezinye iimpawu ze-zodiac. Ngokwazi amandla akho othando, unokuwasebenzisa kakuhle amathuba avelayo kwaye uthathe amanyathelo afanelekileyo okukhokelela kuthando olonwabileyo okanye ubomi bomtshato.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthathela ingqalelo imiba emibini ebalulekileyo - amandla ethu okuzalwa kunye nefuthe leeplanethi kunye neenkwenkwezi kwi-horoscope yethu yobuqu. Inokusinceda sikhethe umsebenzi ofanelekileyo kunye nemfundo yethu, ukuze sifumane ubomi obulungileyo nobunempumelelo.
Okokugqibela kodwa kuncinci, sikholelwa kwiinkwenkwezi, kuba yinto emalunga nathi. Ihoroscope yam ifana nomnwe wobomi bam owadalwa kanye ngexesha endazalwa ngalo. Oko kuthetha ukuba itshathi yam yokuzalwa yohlukile njengeminwe yam yeminwe. Ukubekwa kweplanethi nganye kwihoroscope yam kunokutyhila okuninzi malunga nobuntu bam kunye nekamva lam.
Ezinye iinyani eziyinyani malungaUkuvumisa ngeenkwenkwezi
Ngokophononongo olwenziwa ngo-1999, igama elithi horoscope kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi zezona zihloko ziphandwa kakhulu kwi-Intanethi.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthathwa njengobugcisa kunye nesayensi. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi bubugcisa kuba utoliko luyafuneka ukudibanisa imiba eyahlukeneyo kwaye kunye nabo benze umbono weempawu zomntu. Nangona kunjalo, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kukwajongwa njengenzululwazi njengoko kufuna ukuqonda ngeenkwenkwezi kunye nezibalo.
USixtus IV ngupopu wokuqala ongumKatolika ukuzoba nokutolika inzululwazi ngeenkwenkwezi, uLeo X noPaul III babesoloko bexhomekeke kwicebiso lezazi ngeenkwenkwezi, ngoxa uJulius II wayekhetha umhla wokubekwa kwakhe etroneni ngokuvumisa ngeenkwenkwezi.
I-Astrocartography yindlela yokuvumisa ngeenkwenkwezi yendawo ejolise ekuchongeni iimeko ezahlukeneyo zobomi ngokwahlukana kwendawo. Ngokwengxelo, ngokuthelekisa itshathi yakho yokuzalwa kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, unokumisela indawo apho uya kuba nempumelelo kakhulu.
Khetha Uphawu Virgo Capricorn Gemini Khetha Uphawu